ကောင်းပြီအံ့ဖွယ်၏ တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလမ်းတစ်ဘဝကိုကောင်းစွာလိုသော၏ဒဏ္ဍာရီဖြစ်စေသောတစ်ဦးမှော်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. Thunderkick ထံမှမျှော်လင့်ရသည်နှင့်အမျှ, ဤ အထိုင်ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်းကိုကြည့်ဖို့လုံးဝထူးခြားဆန်းကြယ်ပြီးဂိမ်းလည်းတောက်ပခြင်းနှင့်ထူးခြားသောဖြစ်ပါသည်.
Thunderkick အချို့အလွန်ထူးခြားတဲ့နှင့်အမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်လောင်းကစားရုံဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်လုပ်နေဖြင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခံစားခဲ့ရပြီးသားယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီတစ်ခုတက်လာမယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤ အထိုင်ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်း Thunderkick အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် (NYX).
ဤသည်၌ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာ အထိုင်ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်းကိုမဆို reels သို့မဟုတ် paylines ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်, ကောင်းစွာအနည်းဆုံးပုံမှန်အတိုင်းထုံးစံ၌. သငျသညျတောအုပ်၌နက်ရှိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပျက်သောမျက်နှာပြင်အလယ်၌တစ်ဦးကိုကောင်းစွာတွေ့မြင်, အနည်းငယ်ကြီးမားတှငျးသစ်ပင်များကဝိုင်း. ဒါကြောင့်နက်ရှိုင်းသောအတွင်းကနေသင်္ကေတများထွက် spews အဖြစ်ကောင်းစွာမျှသာမန်ကောင်းစွာဒါပေမယ့်မှော်အရည်အသွေးတွေနဲ့အတူ. သင်တစ်ဦးအနိုင်ရပေါင်းစပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကအနည်းဆုံးသုံးကိုက်ညီခြင်းသင်္ကေတများရရှိရန်လိုအပ်သည်. ထိုသို့သကဲ့သို့ရိုးရှင်း. အဘယ်သူမျှမကအခြားစည်းမျဉ်းကဒီမှာနောက်တော်သို့လိုက်သည်ကို. There are nine different stones in this အထိုင်ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ ရိုင်းအပါအဝင်ဂိမ်း. အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်အခြေခံသင်္ကေတအနီရောင်အရောင်အတွက်ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်ပါတယ်. တိုးပွားစေကိုလည်းကောင်းစွာ၏အခြေစိုက်စခန်းမှာအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားမီးခိုးရောင်ကျောက်များအတွက်ထွင်းထုနေကြတယ်.
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒီ slot က၏အခြားအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်:
တိုးမြှင့်- သငျသညျ combo အနိုင်ရအောင်သုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကိုက်ညီခြင်းသင်္ကေတများခံယူဖို့လိုအပ်. အဆိုပါတူညီသင်္ကေတများကလွယ်ကူသင်သည်ထိုသူတို့အသိအမှတ်မပြုရန်အဘို့အစေရန်တောက်ပါလိမ့်မယ်. အနိုင်ရပေါင်းစပ်ထွက် paid ဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာပဲပြီးနောက်ရဲသင်္ကေတကိုသင်အနိုင်ရပိုမိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးရအနည်းငယ်သစ်ကိုသင်္ကေတများဖြင့်အစားထိုးကြသည်. All these recurring wins will get increasing multipliers up to 32x.
နတ်သမီးပုံပြင် Feature ကို- သင်တစ်ဦးဆုံးရှုံးသွားလှည့်ဖျားခဲ့ကြပြီးနောက်တခါတလေသင် screen ပေါ်မှာတစ်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အောင်အနည်းငယ်နတ်သမီးပုံပြင်တွေ့မြင်. အဆိုပါနတ်သမီးပုံပြင်မျက်နှာပြင်ကနေအပေါငျးတို့သတစ်ခုတည်းသင်္ကေတများပျောက်ကွယ်သွားစေမည်. နယူးသင်္ကေတများရေတွင်းအတွင်းမှပေါ်လာပြီးသင်တစ်ဦးအနိုင်ရရှိသွင်းယူတစ်စက္ကန့်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားသင်္ကေတများရာယူပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါနတ်သမီးလည်းတက်ဖို့မြှောက်ကိန်းကိုတိုးပွါးစေ 32 တစ်ဦးချင်းစီ respin နှင့်အတူအကြိမ်.
ကောင်းပြီအံ့ဖွယ်၏ ကိုကြည့်ဖို့လုံးဝအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်သင်မကြာခဏအနိုင်ပေးနှင့်အတူကောင်းစွာဆုထားတဲ့ဟာအလွန်ဆန်းသစ်သော slot ကဖြစ်ပါတယ်. ဤ အထိုင်ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်းအကြောင်းတစ်ခုအထင်ကြီး RTP နှင့်တကွကြွလာ 96.5%.